Hapana zvinorambidzwa: Russia inotangazve kuzara nendege neDominican Republic, Czech Republic neSouth Korea
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Russia Kuputsa Nhau » Hapana zvinorambidzwa: Russia inotangazve kuzara nendege neDominican Republic, Czech Republic neSouth Korea
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Czechia Breaking News • Dominican Republic Kuvhuna Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Russia Kuputsa Nhau • chengetedzo • South Korea Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kunyangwe kubviswa kwezvirambidzo zvese, kubva parizvino hapana ndege yeRussia kana yekune dzimwe nyika yakazivisa dzimwe ndege dzakavhurwa kubva kuRussia kuenda kunyika idzodzo.
Dominican Republic, Czech Republic neSouth Korea ndidzo nyika nhatu dzekutanga, uko Russia yakatangazve zvizere nendege.
Ndege dzinoenda kuPrague dzinoitwa naRossiya anobva kuSt. Petersburg, uye Aeroflot neCzech Airlines kubva kuMoscow.
Ndege dzinoenda kuDominican Republic dzakavhurwa muna Nyamavhuvhu, iAzur Air chete ichiita charter ndege ipapo.
Vakuru veRussia vanoona nezvekufamba nendege uye anti-coronavirus dambudziko repakati vakazivisa kuti zvese zviripo zviripo nendege kuenda kuDominican Republic, South Korea neCzech Republic zvabviswa kutanga Chishanu, Nyamavhuvhu 27.
Dominican Republic, Czech Republic neSouth Korea ndidzo nyika nhatu dzekutanga, uko Russia yakatangazve kufamba nendege kubvira zvakatemerwa kuiswa mukati medenda, nenyika dzasara dzichiri kufukidzwa nehurongwa hwehurongwa hwekutiza. Zvakare, iyo nzvimbo yakafunga kuwedzera huwandu hwezvikwata zvenguva dzose kuenda kuEgypt kutanga Chishanu.
Kubva parizvino hapana mutakuri wemhepo weRussia kana wekunze ati amhan'arira dzimwe ndege kuvhurirwa nyika idzodzo. Vols kuPrague zvinoitwa ne Rossiya Petersburg, uye Aeroflot uye Czech Airlines kubva kuMoscow. Czech Republic inoramba yakavharwa kune vashanyi sevapfuuri chete vane mugari wenyika kana mvumo yekugara, kana avo vanosvika kuzvidzidzo kana kurapwa vanogona kupinda munyika.
South Korea yakavharwawo zvizere kune vashanyi. Vese avo vanopinda munyika (chete vagari kana vafambi vane mvumo yekugara) vanozodikanwa kuti vagare vari vega kwemazuva gumi nemana. Zvakare, munaKubvumbi apfuura nyika yakasiya mafambiro-emahara neRussia uye mavisa akamiswa achiburitswa. Aeroflot chete ndiyo inoenda nendege kunyika.
Ndege dzinoenda kuDominican Republic dzakavhurwa muna Nyamavhuvhu, iAzur Air chete ichiita charter ndege ipapo. Aeroflot yakazivisawo kufarira kwayo kwairi kuenda, kunyangwe kambani iyi isati yazivisa zuva chairo rekutanga kwendege.
Fraport Boka: Mari inowanikwa uye purofiti yakakwira zvakanyanya ...
Nei Sarudzo dzeUNWTO Dzichifanirwa Kuve Nyaya Yechimbichimbi...
Empire State Building Yese Yakashongedzwa Kunze KwemaHoridhe
A New Virus Nightmare? WTN Inodaidza Global Vaccine...
Boeing inosundidzira vatakuri vatsva 737-800BCF
Invest, Mari & Kutangazve: Tourism Investment ...
Jamaica Tourism uye Grupo Pinero: Special Tourism...
Jamaica Inotemesa Zvirambidzo Zvitsva zvekufamba paAfrica...
Airbus uye Air Lease Corporation Inotangisa New Multi...
Vashandi veKaiser Vanotanga Kuramwa mabasa Mangwana na7 AM:...